D Phyo ပြောတဲ့အနှစ်သက်ဆုံးဂီတအကြောင်း
17 May 2017 . 11:48 AM
အဆိုတော် D Phyo ကဂီတဖန်တီးသူတစ်ယောက် အဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သူသဘောအကျဆုံး Music ပုံစံကိုပြောပြထားပါတယ်။
အကြိုက်ဆုံးအဆိုတော်ရယ်လို့မရှိပါဘူး။ အကုန်လုံးကိုကြိုက်တယ်။ အကုန်လုံးကိုနားထောင်ဖြစ်တယ်။ သီချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် Rock သီချင်းတော်တော်များများကို ကြိုက်တယ်။ သီချင်းအနေနဲ့ လည်းအကြိုက်ဆုံးသီချင်းဆိုတာထက် သီချင်းကိုအစုံနားထောင်ပါတယ်။
Rock သီချင်းတွေနဲ့ သီချင်းမြုးမြူးလေးတွေကိုသဘောကျတယ်။ ကိုယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ နည်းနည်းတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ကျနေတာပေါ့။ ပရိသတ်ကကျ ကျွန်တော့်ကိုသီချင်းအေးအေးလေးတွေနဲ့လက်ခံကြတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကျ တော့လူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် သီချင်းအမြူးလေးတွေကိုပိုသဘောကျတယ်။
ကိုယ်သဘောကျတဲ့ Music ပုံစံနဲ့ဖန်တီးမှု
လက်ရှိအနေနဲ့ အကြိုက်ဆုံး Music နဲ့လုပ်ဖြစ်နေတာက Rock ပဲပေါ့။ နောက်ပိုင်းမှာတော့အခွင့်သာရင် သာသလို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းမျိုးလေးတွေ ထည့်သွားဖို့ဆိုသွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ အခုချိန်ထိတော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလေးတွေရော ပရိသတ်သဘောကျမယ့်ပုံစံတွေရော မျှပြီးလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတုန်းပါပဲ။
အဆိုတျော D Phyo ကဂီတဖနျတီးသူတဈယောကျ အဆိုတျောတဈယောကျအနနေဲ့ သူသဘောအကဆြုံး Music ပုံစံကိုပွောပွထားပါတယျ။
အကွိုကျဆုံးအဆိုတျောရယျလို့မရှိပါဘူး။ အကုနျလုံးကိုကွိုကျတယျ။ အကုနျလုံးကိုနားထောငျဖွဈတယျ။ သီခငျြးနဲ့ပတျသကျရငျ Rock သီခငျြးတျောတျောမြားမြားကို ကွိုကျတယျ။ သီခငျြးအနနေဲ့ လညျးအကွိုကျဆုံးသီခငျြးဆိုတာထကျ သီခငျြးကိုအစုံနားထောငျပါတယျ။
Rock သီခငျြးတှနေဲ့ သီခငျြးမွုးမွူးလေးတှကေိုသဘောကတြယျ။ ကိုယျဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ နညျးနညျးတော့ဆနျ့ကငျြဘကျကနြတောပေါ့။ ပရိသတျကကြ ကြှနျတေျာ့ကိုသီခငျြးအေးအေးလေးတှနေဲ့လကျခံကွတယျ။ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ကြ တော့လူငယျဖွဈတဲ့အတှကျ သီခငျြးအမွူးလေးတှကေိုပိုသဘောကတြယျ။
ကိုယျသဘောကတြဲ့ Music ပုံစံနဲ့ဖနျတီးမှု
လကျရှိအနနေဲ့ အကွိုကျဆုံး Music နဲ့လုပျဖွဈနတောက Rock ပဲပေါ့။ နောကျပိုငျးမှာတော့အခှငျ့သာရငျ သာသလို ကိုယျကွိုကျတဲ့သီခငျြးမြိုးလေးတှေ ထညျ့သှားဖို့ဆိုသှားဖို့ အစီအစဉျရှိပါတယျ။ အခုခြိနျထိတော့ ကိုယျလုပျခငျြတာလေးတှရေော ပရိသတျသဘောကမြယျ့ပုံစံတှရေော မြှပွီးလုပျဖို့ပွငျဆငျနတေုနျးပါပဲ။
by Zawyè .3weeks ago